Haino amanjerim-panjakana : Napetraka ao Toliara ny haitaon’ny TNT -
AccueilRaharaham-pirenenaHaino amanjerim-panjakana : Napetraka ao Toliara ny haitaon’ny TNT
18/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fahitalavitra malagasy voalohany maharakotra an’i Madagasikara. Nofidiana hankalazana ny faha -50 taonan’ny fahitalavitra Malagasy, na ny TVM ny tanànan’i Toliara, ary nifanindran-dalana tamin’izany ihany koa ny fametrahana sy fampandehanana ny TNT, na ny Télévision Numérique Terrestre any amin’ny tanànan’i Toliara. Tanàna faharoa misitraka io fivoaran’ny teknolojia eo amin’ny sehatry ny fahitalavitra io taorian’i Nosy Be. Araka izany, dia efa manana ny fitaovana fampitan-tsary sy feo amin’ny endrika nomerika, ary manana tanjaka 1000 watts ny foiben’ny TVM any an-toerana. Tonga tany an-toerana niara-nankalaza izay tsingerintaona faha-50 ny TVM izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, izay nitokana ihany koa ireo fotodrafitrasa samihafa vita tany an-toerana, ka anisan’ireny ny “Jardin de la Mer”.
Miainga amin’ireo fitaovana harifomba sy maoderina ireo, dia hivoatra manaraka ny toetr’andro ny fandraisan’ny mponin’i Toliara ny fahitalavitra. Nisy rahateo ny fitaovana fandraisana ny sary, na ‘Décodeurs” miisa 200 nozaraina maimaimpoana nandritra ny fampahafantarana ny fidiran’i Toliara ao anatin’ny TNT izay. Nandritra izany ihany koa ny nanoloran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fitaovana sy kojakoja samihafa momba ny teknika sy ny informatika masoivohon’ny RNM sy TVM amin’ireo distrika 8 mandrafitra ny faritra Atsimo Andrefana.
“Tahiry velona ho an’ny Malagasy” no lohahevitra entina hankalazana ny faha-50 taonan’ny TVM. Ho fanehoana io lohahevitra io ny fampirantiana sary mamintina ny 50 taona niainan’ity haino aman-jery ity. Nahazo fankasitrahana avy amin’ny filohan’ny Repoblika ny minisiteran’ny serasera sy ny fifandraisana amin’ny andrim-panjakana, tarihin’ny Minisitra Harry Laurent Rahajason, amin’izao fankalazana izao, ary mampirisika ny TVM mba ho fitaratra amin’ny fampitam-baovaon’ny Fanjakana, ary hitahiry ny tantaran’i Madagasikara ao anatin’ny tahirin’izy ireo. Tonga tany an-toerana rahateo ny minisitra Harry Laurent Rahajason, niaraka tamin’ireo mpikambana maro ao amin’ny governemanta, nanotrona ity lanonana ity.
Mihazakazaka ny ho eto Madagasikara ireo firenena vahiny. Ankoatra ireo masoivoho vahiny efa eto an-toerana, dia tonga nanatitra ny taratasy manendry azy tamin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny Lapa-panjakana Iavoloha, ireo masoivoho vahiny telo, ny ...Tohiny
Hery Rajaonarimampianina : « Endriky ny Fisandratana ny fandraisana andraikitra »